Ukuthenga Izilinganiso Zebhizinisi Le-Optical Tape Ngevolumu Enkulu
Umholi wemboni yegumbi lobunjiniyela elihlanzekile kakhulu elihlanzekile uguqule ngempumelelo inkambu yefilimu esebenzayo ukuze aqale uhambo olusha lokukhula. Ibhizinisi lendabuko lenkampani yi-R & D, ukukhiqizwa nokudayiswa kobunjiniyela be-ultra clean laboratory kanye nomkhiqizo osekelayo ...Funda kabanzi »
Umbukiso we-2017 we-Shanghai International touch and display uzoba sehholo lemibukiso le-Shanghai World Expo kusukela ngo-April 25 kuya ku-27. Lo mbukiso uletha ndawonye amabhizinisi kusukela kusikrini sokuthinta, iphaneli yokubonisa, ukukhiqizwa kwamaselula, izinto ezilalelwayo nezibukwayo, i-electronic scheme design, njll. I-OLED , t...Funda kabanzi »
Kusukela yasungulwa ngo-2007, i-China (Dongguan) umbukiso wezobuchwepheshe bokukhiqiza amafilimu aphezulu kanye ne-adhesive tape, ifilimu evikelayo kanye nombukiso wefilimu optical (CAPE) isiphenduke inkomba yemakethe kanye ne-vane yefilimu esebenza kahle kakhulu, i-die-cutting, i-adhesive tape, isivikelo. fil...Funda kabanzi »
Amadili Aluhlaza: 4-pack Outdoor Solar LED Lights $38 (Reg. $75), ngaphezulu
Isikhathi sokuthumela: Mar-05-2019
I-SolarTech-LED nge-Amazon inikezela ngamaphekhi amane we-Outdoor Solar LED Lights ngo-$37.99 ohanjiswe lapho ikhodi yephromo i-VCTF2UDM isetshenziswa ngesikhathi sokuphuma. Njengesiqhathaniso, imvamisa ithengisa ngama- $75 noma ngaphezulu. Lena inani eliphansi kakhulu esililandele ngaso sonke isikhathi cishe ngama-$30. Yenza kube lula isethi yakho yokukhanyisa ngaphandle...Funda kabanzi »